Ogaden News Agency (ONA) – Dhul-Gariir Culus oo Markale Ka Dhacay Badhtamaha Dalka Taliyaaniga.
Dhul-Gariir Culus oo Markale Ka Dhacay Badhtamaha Dalka Taliyaaniga.
Posted by ONA Admin	/ October 31, 2016
Dhulgariir lagu qiyaasay awoodiis 6.6M ayaa markale ka dhacay subaxnimada Axadda badhtamaha dalka Taliyaaniga, kaas oo laga dareemay magaalo madaxda dalka ee Rome.
Wararku waxay sheegayaan in dhulgariirka xoogiisa uu ka dhacay meel aad ugu dhaw magaalada lagu magacaabo Perugia. Dhulgariir kan oo kale ah ayaa xagaagii sanadkan 2016 ka dhacay isla bartamaha Talyaaniga kaas oo ay ku geeriyoodeen 250 qof.
Sida laga soo xiganayo Wakaalada Wararka ee Reuters guryo badan ayaa ku soo dumey dadkii ku noolaa, waxaana goobahaas gaadhey shaqaalaha hay’adda badbaadada rayidka, majiro wax hadal ah oo ka soo baxay hay’adda badbaada rayidka ah ee Talyaaniga, khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay masiibadan.
Waxa xusid mudan in maalintii Arbacada ahayd ee la soo dhaafay ay ahayd markii dhul gariirkii u danbeeyay uu ka dhacay isla badhtamaha dalkaas Taliaaniga, waxa uu kani noqonayaa kii afaraad tan iyo bishii August ee sanadkan 2016 ee ku jiro.